Ameerikaa: Himata Donaald Tiraamp aangoorraa buusuu danda'uurratti sagaleen kennaamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa himata pireezidantii biyyattii Donaald Tiraamp aangoorraa buusuu danda'u irratti sagalee kennaa jira.
Himati akkanaa kan Afaan Ingiliziin 'impeachment' jedhamu qaamni seera baasu Koongirasiin gadii ykn manni maree bakka bu'ootaa pireezidantii aangoorra jiru yakkaan yoo himatu jechuudha.
Tiraampiin aangoorra kaasuuf yeroo kanatti Dimookraatotafi Rippaablikoota jidduutti morkiin eegaleera.
Morkiin kun yoo xiqqaate saatii ja'a fudhata jedhamee eegama.
Tiraamp Jala-butlii aangoorraa buusuuf sagaleen kennamurratti xalayaa barreessan
Morkiin kun akka dhumeen keeyyata aangoorra kaasuu lamaan - aangoo qisaassessu fi koongireessi kabajuu dhiisuu - irratti dhuunfaan sagalee ni keennu.
Wayita manni maree bakka bu'ootaa himata kana mirkaneessuuf sagalee kennaa jiru kanatti Ameerikaa kutaalee adda addaa keessatti namootni pireezidantichi akka aangoorra kaafamu gaafatan hiriira bahaa jiru.
Image copyright Erik McGregor/LightRocket via Getty Images
Diimokiraattonni aangoorraa kaafamu isaa akka deeggaran warri Rippablikaanonni ammoo akka morman eegamaa turullee galgala kana dimokirattota keessaa kan morman rippabliikaanota keessaa ammoo kan deeggaran sagaleen isaanii dhagaahamaa jira.
Manni maree bakka bu'ootaa himata kana sagalee caalmaan kan mirkaneessu yoo ta'e pireezidantichi baatii tokko booda seneetii duratti dhiyaatu. Seneetiinis yoo itti mure aangoorraa kaafamu.
Haa ta'u malee sun waan ta'u hin fakkaatu sababiinsaa ammoo seneetiin namoota pireezidanticha deeggarantu keessatti baay'ata.
Himatichi mana maree bakka bu'ootaatiin kan mirkanaa'u yoo ta'e gara Koongiransii Olii ykn seneetiitti ergama. Seneetiinis kan mirkaneessu yoo ta'e pireezidantichi aangoorraa kaafama.
Pireezidantii Ameerikaa irratti himati akkanaa banamuun baratamaa miti.
Amma dura pireezidantoota lama Andiriiwu Joonsan bara 1896, akkasumas Bill Kiliintan bara 1999 himati akkanaa irratti mirkanaa'ee ture.
Haa ta'u malee lamaanuu aangoorraa hin kaafamne.
Manni maree bakka bu'ootaa galgala kana Tiraamp irratti himata kana kan mirkaneessu yoo ta'e seenaa Ameerikaa keessatti Tiraamp pireezidantii sadaffa ta'u.
Ofii maal balleessinaan himati kun irratti baname?
Filannoo Ameerikaa bara 2020 irratti morkataa isaanii jabaa ta'uu dana'u jedhamanii kan yaadamani pireezidantii itti aanaa duraanii Joo Baayidan irratti himata bansiisuuf aangoo isaanii fayyadamuun pireezidantii Yuukireen irratti dhiibbaa taasisaniiru jedhamuuni kan himataman.
Kanaanis aangoo isaanii dhimmi siyaasa dhuunfaaf itti fayyadamaniiru jedhamanii baka buutonni paartii diimokiraat kan keessatti heddummatan mana maree bakka bu'ootaatiin yakkaman.
Wayita joo baayidan aangoorra turan ilmi isaanii kaampanii biyya Yuukireeniif hojjetaa ture.
Pireezidantiin Yuukireen Zeleniiskiin Joo baayidaniifi ilma isaanii Hantar irratti himata bananii taphaan alaa akka taasisan Donaald Tiraamp bilbilaan gaafataniiru jedhame.
Pireezidanti Donaald Tiraamp garuu pireezidantii yuukireen waliin bilbilaan haasa'uu amananii dogoggorri hojjetan tokkollee akka hin jirre dubbatu.
Akka Tiraamp jedhanitti himati kun kan isaanirratti banamuu eegale erga gaafa aangootti bahaniiti.
Sababni isaas jibba dhunfaan haleellaa isaanirratti baname akka ta'etti yaadu.
Kongireesiin US dubbii sanyummaa Tiraampi dubartootarratti aggaaman balaaleffate
Itoophiyaan namooni jalqabaa lama koronaavaayirasiin du'uu beeksifte